ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်သည့် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် လက်ကား သဘာဝပဲပိစပ်ဖယောင်းအတုံးများ | Winby
ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဂေဟစနစ်ဖော်ရွေသော၊ အော်ဂဲနစ်
အရွယ်အစား: 500g/အိတ် 25kg/ပုံး
ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် 100% သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်သော ပဲပိစပ်ဖယောင်း အချပ်များကို လက်ကားရောင်းချပါသည်။
၁။ ရနံ့မပါသော ပဲပိစပ်ဖယောင်းတိုင်များသည် paraffin ဖယောင်းထက် ပိုရှည်သည်။
2. ပဲပိစပ်ဖယောင်းသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သော အရင်းအမြစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
3. သဘာဝပဲပိစပ်ဖယောင်းသည် paraffin wax ထက် ပိုမိုလောင်ကျွမ်းပြီး အနက်ရောင်မီးခိုးမထွက်ဘဲ ကျန်အကြွင်းအကျန်မရှိသောကြောင့် သင့်အိမ်၏လေထုအရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
4. ပဲပိစပ်ဖယောင်းတိုင်များသည် အဆိပ်မရှိ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပဲပိစပ်ဖယောင်းကို ဖန်ဘူးများတွင် ပြန်သုံးနိုင်သည်။
ဖန်နံ့သာဆီ၊ Tealights၊ Pillar ဖယောင်းတိုင်များ၊ အုတ်ဂူဖယောင်းတိုင်များ၊ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ ဖယောင်းတိုင်များနှင့် အခြားကုန်ကြမ်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း။ 500G/အိတ်၊ 25kg/carton၊ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကို လက်ခံပါ။
MOQ 3000 pcs ကျွန်ုပ်တို့တွင်စတော့ရှိလျှင်သေးငယ်သောအော်ဒါများကိုလက်ခံနိုင်သည်။
ပထမ၊ ငါတို့မှာရှိတယ်။ လက်မှတ် ယူရိုစံနှုန်းအောက်မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖယောင်းတိုင်များသည် ဥရောပစံနှုန်းအတိုင်း ကောင်းမွန်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖယောင်းတိုင်များ၏ အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ရုရှား၊ ဥရောပ၊ အရှေ့တောင်ဘက်စသည်ဖြင့် နိုင်ငံအများအပြားနှင့် ဒေသအများအပြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဖောက်သည်များက ကောင်းစွာလက်ခံရရှိကြသည်။
ဒုတိယအနေနဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖယောင်းတိုင်များအတွက် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် paraffin ဖယောင်း၊ ပဲဖယောင်း၊ ပျားဖယောင်းနှင့် အခြားအပင်ဖယောင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ပဲပိစပ်ဖယောင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏ 10% ပမာဏအထိ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သောရနံ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ပဲပိစပ်ဖယောင်းတွင် ဓာတုဗေဒ ဖြည့်စွက်စာ သို့မဟုတ် ဆိုးဆေး မပါရှိပါ။
တတိယ အမွှေးအကြိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖယောင်းတိုင်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော အမွှေးနံ့ 100 ကျော်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရနံ့ရောင်းချသူများသည် CPL ရနံ့နှင့် Firmenich တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးက ထိပ်တန်းပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေမွှေးရောင်းချသူများ၏ အမှတ်တံဆိပ်များ။ ဤရနံ့များသည် အမွှေးနံ့သာများအပြင် မရှိမဖြစ်ဆီများကို အသုံးပြု၍ ရရှိပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရနံ့များအတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရနံ့အမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အနံ့ပြင်းသော အနံ့ကို နှစ်သက်ပါက၊ သင်သည် ဖယောင်းတိုင်တွင် 10% ဆီ ရွေးနိုင်သည်။ အနံ့မွှေးတာကို ကြိုက်ရင် ဖယောင်းတိုင်ထဲက ဆီ 5% ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့ အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနရှိပြီး သုံးစွဲသူများအတွက် ODM နှင့် OEM ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကနဦး အယူအဆမှ နောက်ဆုံး အတည်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်များအထိ ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်နာများသည် သင့်ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးပါမည်။
ယခင်- မရှိမဖြစ်ဆီမွှေး ကျောက်ဖယောင်းတိုင်
နောက်တစ်ခု: အနုပညာဖယောင်းတိုင် GY01-GB63-58J
Soy Wax Flakes များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖယောင်းတိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နှစ် 20 အတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မွှေးပျံ့သောဖယောင်းတိုင်များ၊ ဖယောင်းတိုင်အိုးများ၊ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ ပဲဖယောင်းများ၊ ချည်သားမီးစာများ၊ သစ်သားမီးစာများ၊ ဖယောင်းတိုင် DIY ကိရိယာများနှင့် အခြားဖယောင်းတိုင်ပစ္စည်းများကို အဓိကထားပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်စိတ်ကူးများနှင့် ဒီဇိုင်းအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါသည်။
Frosted Matte ဖန်ခွက်အလွတ် ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်- ရှန်ပိန်...
Reed diffuser အနံ့မွှေးပျံ့သောဖယောင်းတိုင်လက်ဆောင်အစုံ
TC23 - 5.6 အောင်စ လက်ကားရနံ့မွှေးဖယောင်းတိုင်တစ်လက်...